Loharanon'ny rano velona - Church of God World Switzerland
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-03 > Loharanon'ny rano velona
I Anna, vehivavy antitra antitra dia tonga nody taorian'ny andro mampihetsi-po tany am-piasana. Nipetraka irery tao amin'ny efitranony kely sy feno fanetren-tena izy. Nipetraka teo amin'ny fantsom-pandriana efa nipetraka izy. Mitovy ny isan'andro. "Foana ny fiainana", hoy izy nieritreritra mafy. «Irery aho».
Tao amin'ny faritany poshita, i Gary, mpandraharaha mahomby, nipetraka teo amin'ny zaridainany. Toa tsara daholo ny zava-drehetra. Mbola nisy tsy hita ihany anefa. Tsy afaka nilaza izay tsy mety taminy izy. Nahatsiaro fahabangana anaty izy.
Olona samy hafa. Toe-javatra samihafa. Olana mitovy. Tsy mahita ny fahafaham-po marina ny olona, ​​ny fananana, ny andro taloha na ny fahafinaretana. Ho azy ireo, ny fiainana dia toy ny ivon'ny donut - foana.
Ao amin'ny loharano Jakobs
Niala tao Jerosalema i Jesosy noho ny fanoheran'ny Fariseo. Rehefa niverina tany amin'ny faritanin'i Galilia izy, dia tsy maintsy mamaky an'i Samaria, faritra izay tokony hialana amin'ny Jiosy. Nandresy an'i Jerosalema ny Asyrianina, natao sesitany tany Asyria ny Isiraelita, ary nisy vahiny nentina nankany amin'io faritra io hitandrina ny fandriampahalemana. Ny vahoakan'Andriamanitra dia nafangaro tamin'ny mpanompo sampy, izay "nohamavoin'ny Jiosy madio".
Nangetaheta i Jesosy, nihena ny hafanana tamin’ny mitataovovonana. Ary tonga teo amin'ny fantsakan'i Jakoba teo ivelan'ny tanànan'i Sykara izy, izay nisintonana ny rano. Nifanena tamin’ny vehivavy iray teo am-pantsakana i Jesosy ary nangataka azy mba hanome rano azy mba hanombohana resaka. Noheverina ho fady teo amin’ny Jiosy ny fitondran-tena toy izany. (Johanes 4,7-9) Izany dia satria vehivavy samaritana nohamavoina sy vehivavy izy. Nolavina izy satria ratsy laza. Nanan-janaka dimy izy ary niara-nipetraka tamin’ny lehilahy iray ary irery teny amin’ny toerana malalaka. Tsy nifampiresaka teny amin’ny toerana be olona ny lehilahy sy vehivavy tsy mpihavana.
Ireo no fameperana ara-kolontsaina izay tsy noraharahain’i Jesosy. Tsapany fa nanana lesoka izy, banga foana. Nitady fiarovana teo amin’ny fifandraisan’ny olona izy fa tsy nahita izany. Nisy tsy ampy, saingy tsy fantany hoe inona izany. Tsy mbola teo am-pelatanan’ny lehilahy enina samy hafa ny fahafenony ary azo inoana fa nampijaly sy nampietry ny sasany tamin’izy ireo. Ny lalàna momba ny fisaraham-panambadiana dia namela ny lehilahy iray "nandroaka" vehivavy noho ny antony tsy dia misy dikany. Nolavina izy, nefa nampanantena i Jesosy fa hanala ny hetahetany ara-panahy. Nilaza taminy izy fa izy no Mesia andrasana. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: “Raha fantatrao ny fanomezan’Andriamanitra sy izay milaza aminao hoe: Omeo Aho hosotroina, dia hangataka aminy ianao, ka homeny rano velona ianao. Izay misotro ity rano ity dia mbola hangetaheta indray; Fa na iza na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy hangetaheta mandrakizay, fa ny rano izay homeko azy no ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay » (Jaona. 4,10, 13-14).
Nizara ny traikefany tamin’ny mponina tao an-tanànany tamin-kafanam-po izy, ary maro no nino an’i Jesosy ho Mpamonjy izao tontolo izao. Nanomboka nahatakatra sy niaina izany fiainana vaovao izany izy - fa afaka ny ho ao amin’i Kristy tanteraka. I Jesosy no loharanon’ny rano velona: “Ny oloko manao fahotana roa heny: mahafoy Ahy izy ka manao lavaka famorian-drano mitresaka ka tsy mahatana rano” (Jeremia). 2,13).
Anna, Gary ary ilay vehivavy samaritana dia nisotro tamin'ny loharanon'izao tontolo izao. Ny rano avy ao aminy dia tsy nahafeno ny fahafaha-miaina teo amin'ny fiainany. Na ny mpino aza dia mety hiainana izany fahafoanana izany.
Mahatsiaro foana ve ianao sa manirery? Misy olona na inona na inona eo amin'ny fiainanao miezaka mameno ny banga? Tsy misy fifaliana sy fiadanana ve eo amin’ny fiainanao? Ny famalian’Andriamanitra ireo fahatsapana fahabangana ireo dia ny mameno ny banga eo amin’ny fiainanao amin’ny fanatrehany. Nohariana mba hifandray amin’Andriamanitra ianao. Izy ireo dia noforonina mba hankafy ny fahatsapana ny maha-izy azy, ny fanekena ary ny fankasitrahana avy aminy. Mbola hahatsiaro ho tsy feno ianao rehefa miezaka mameno izany banga izany amin’ny zavatra hafa ankoatra ny fanatrehany. Amin'ny alalan'ny fifandraisana akaiky tsy tapaka amin'i Jesosy dia hahita ny valin'ny olana rehetra eo amin'ny fiainana ianao. Tsy hanadino anao izy. Ny anaranao dia ao amin'ny fampanantenany maro. Olombelona sy Andriamanitra koa i Jesosy, ary toy ny fisakaizana rehetra ifampizaranao amin’ny olon-kafa, dia mila fotoana ny fifandraisana iray. Midika izany fa mandany fotoana miaraka sy mifampizara, mihaino ary miresaka momba izay rehetra tonga ao an-tsaina. « Endrey ny hasarobidin’ny fahasoavanao, Andriamanitra ô! Mialokaloka ao amin'ny aloky ny elatrao ny olona. Avelao hifaly amin'ny harena ao an-tranonao izy ireo, ary homenao ranom-pifaliana hosotroina izy. Ao aminao no loharanon’aina rehetra; ao amin’ny fahazavanao no ahitantsika ny mazava” (Salamo 36,9).
by Owen Visagie